स्वास्थ्यक्षेत्रमा नैतिकता कति ?
कानुन त देखिने सीमारेखा हो । नैतिकता मान्छेमा हुनैपर्ने सीमा हो । नैतिकता भनेकै लोकलज्जा हो, लोकलज्जा मानिएन, आफूले आफैलाई ढाँटेर लाभ लिनु भनेको आफैमाथि गरिने अपराध हो । यस्तो अपराध वर्तमान कालखण्डको नेपालमा राजनीतिदेखि प्रशासनसम्म, व्यवसायीदेखि समाजसेवामा समेत व्यापक छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा त नदेखिनेगरी आफूले खाएको सपथलाई समेत ढाँट्ने गरिएको छ ।
आमाको कोख भाडामा लगाएर सरोगेसी बच्चा जन्माउन सहयोग गर्ने स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । आमाको कोखको पनि दलाली खाने ?
गर्भमा छोरा छ कि छोरी ? आफूले आफैलाई ढाँटेर गोप्य रुपमा जाँच्ने र भ्रुणहत्या गर्ने प्रचलन व्यापक बढेर गएको छ । टोलटोलमा गर्भपतनका कारखानाहरु खोलिएका छन् । दिनमा हजारौं साइनबोर्ड देखिन्छन्– यहाँ सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराइन्छ । नियम मिचेर धेरै गर्भपतन हुन्छन् । यो खुला सत्य हो । गर्भमा छोरी छिन् भने गर्भपतन गराइन्छ, यो पनि खुला सत्य हो । स्वास्थ्यक्षेत्रले नै खाएको सपथ तोड्छन् र पैसाका लागि नैतिकता छोड्छन् भने बाइफाले राजनीतिको के कुरा गर्नु ? घरमा भुटुन नहालेको गुन्द्रुकको झोल खाएर जागीर खाने कर्मचारी कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग टेबुलमुनी पैसा नबुझी कमै गर्दैन, तिनको के कुरा गर्नु ? कर्मचारी भन्छन्– तलव त तलव नै हो, आउँछ, आउँछ । तलवबाहेक पनि त कमाउनु प¥यो । अधिकांश कर्मचारीको महगा जग्गा छन्, घर छन्, परिवारजन सुखसुविधामा छन् । त्यही सरहको कमाउने श्रमजीवी जहिले पनि हाहाकारमा हुन्छ ? मीठो खान दशैं कुरेर बस्छ किन ? किनकि राज्यले कानुन व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गराउन सकेन ।
पछिल्लो घटना पाटन अस्पतालको ।
डाक्टरले नै चोरेछन् पोर्टेवल अल्ट्रासाउण्ड मेसिन । हरेक कार्यालयका ड्राइभरले अलिकति बिग्रेको मोटर थन्क्याउने, कार्यालयले नयाँ किन्न र ग्यारेजमा थन्किएका महगा गाडीका पार्टपुर्जाहरु दिनदिनै हराउने काम सामान्य हो । पाटन अस्पतालजस्तो स्थानमा डाक्टरले नै अल्ट्रासाउण्ड मेसिन चोर्नु सामान्य हो कि असामान्य ? चिकित्सक संघ बोल्दैन ।
खबर आयो– आईसीयू वार्डबाट हराएको यो मेसिन २० लाख ७९ हजार ८ सय ७ रुपैयाँमा किनिएको रहेछ । जेठ १७ गते मेसिन चोरी भयो, प्रहरी केस पनि भयो र चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न दुईजना पक्राउ परे । को पक्राउ परेछन्– सर्लाही बलरा नगरपालिका १ घर भएका ३६ वर्षीय डा. प्रवीण मिश्र र महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका १३ का रमेशकुमार शर्मा । अचम्मको रहस्य के खुल्यो भने– अस्पतालको आईसीयू वार्डमा रहेको पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन मर्मत गर्न कम्पनीबाट आएका हौं भन्ने बहाना बनाई मेसिन उडाएका रहेछन् । पक्राउ परेका डा. मिश्रको महोत्तरीको बर्दिबासमा डीएनबी मेडिकेयर क्लिनिक रहेछ । उनीहरूको साथबाट मेसिन समेत बरामद भयो ।
सवाल मेसिनको मात्र होइन, सवाल ह्रास हुँदै गएको नैतिकताको हो । एउटा स्वास्थ्यकर्मी बिरामीका लागि भगवान हो । त्यही भगवान कहिले कहिले बिरामीको यौनशोषण गर्ने, बिरामीलाई अनावश्यक ठग्ने काम गर्छ भने अव चोरीमा समेत संलग्न हुनथालेका छन् । यति हुँदा पनि हामी नीतिमा, नैतिकतामा, खाएको सपथको सीमाभित्र बस्छौं, बसेका छौं, सबैलाई बसाल्छौं, जो नैतिकपतनका रुपमा काम गर्छन्, तिनीहरुमाथि कारवाही गर्छौं भनेर मेडिकल काउन्सिलसमेत भन्दैन । राजनीतिक दबाब र प्रभाव हुनेले जे गर्दा पनि छुट पाउने हुनाले समाज र सरकारमा बिकृति र बिसंगति बढ्दै गएको छ । यी सब घटनाक्रम व्यक्तिको प्रगतिको द्योतक त होला, राष्ट्र उन्नतिको गति पक्कै होइन । राष्ट्रको सवलताका लागि, शान्ति र समुन्नतिका लागि सकल दर्जाका नागरिकमा नैतिकबल बिकसित हुनैपर्छ । बिना नैतिकबल कुनै क्षेत्रमा पनि अग्रगमन सम्भव छैन ।
अझ स्वास्थ्यक्षेत्रमा त नैतिकबल र सेवाभाव सबैभन्दा बढी हुनुपर्छ ।